Home Wararka Al Shabaab oo xabsiga dhigtay sadax ganacsato oo reer Diinsoor ah, G....
Al Shabaab oo xabsiga dhigtay sadax ganacsato oo reer Diinsoor ah, G. Bay
Sida ay sheegayaan wararaka naga soo gaarayo magalaada Diinsooor ee Gobolka Bay ayaa Sheegaya in rag ka ganacsada xoolaha nool (Live Stock) ayey Al Shabaab ku xireen tuulada Kurmaan oo ay Al Shabaab Maamusho oo hoos taago degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
Ganacsatada la xiray oo garaya ila sedax qof ayaa kala ah Axmed Cali Barre, Nurow Xasan iyo Madkirin Cali, waxaana lagu eedeyay in ay xoolo iyo alaab geeyn jireen degmada Diinsoor oo ay haystan Ciidamada Itoobiyanka iyo askar katirsan maamulka Koonfur Galbeed oo hoogaminayo Cabdiaziz Laftagareen.
Ururka Al Shabaab ayaa marwalba xiro dadka alaab ama badeecoyin geeya magaaloyinka ama degaanada ay maamulan ciidamada Shisheeyaha iyo maamulada kala duwaan ee ka dhisan Somalia. Halka marar badan ay gubeen badeecado loo waday degaanada aan gacanta ugu jirin Al Shabaab.
Hase yeeshe Sedaxdan ganacsatada ah waxa ugu dambeeyntii loo gudbiyay xabsiga weyn ay Al Shabaab ku leedahay tuulada Yaaqbaraway oo 60 kilomitir u jirto degmada Diinsoor sida aan kaso xiganay ilo lagu kalsoonaan karo.
Xabsiga ay Al Shabaab ku ledahay tuulada Yaaqbaraway, waa xabsiga u weyn oo ay Al Shabaab ku leedahay guud ahaanba gobolka Bay, iyadoo oo marwalba tacadiyo iyo jir dil loo geysto maxabiista ku xiran xabsiga.
Isbucan aan ku jirno, qaar kamid ganacsatada u xirnaa Al Shabaab ayaa ku xanuunsaday xabsiga ku yaala tuulada Yaaqbaraway, waxaana u daran Axmed Cali Barre oo naqaska ku dhegay, taasi ayaa keentay in Axmed Cali Barre laga bixiyo xabsiga u ku xirnaa kadibna la geeyay guri ku yaala isla tuulada Yaaqbaraway oo laga dhigay xarun caafimad markii tariikhdu ahayd 26ka Oktober.
Guriga laga dhigay xaruun caafimad oo ku yaala tuulada Yaaqbaraway oo ay maamusho ururka Al Shabaab, waxa lagu daweeya dagaalamayasha Al Shabaab iyo madaxda Xarakada oo ku sugun degaanada kala duwan oo katirsan gobolka Bay iyadoo mararka qaar sido kale lagu daweeyay maxabista u xiran Al Shabaab sida Axmed Cali Barre oo 26ka Oktober ila maanta uu ku jiro guriga.